Soomaalida Sweden - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Rikoodh oradyahan Soomaali iswiidhish ah oo la jebiyey
Orod-yahanka iswiidhishka ee lagu magacaabo Andreas Kramer ayaa dhigay rikoodh cusub ee orodka 800 ee mitir mar uu ka tartamayay Karlstad GP. Rikoodhkan oo uu hore u dhigay ciyaaryahan soomaaliyeed oo layidhaahdo Cabdirisaaq Diirshe.
Riwaayad lagu muujiyey qisooyinka dhallinyarada somaaliyeed
Magaalada Malmö ayaa todobaadkan lagu soo bandhigay riwaayad ka hadlaysa qisooyinka dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool Skandineefiya.
Maxkamadda sare oo xukun ka riday dacwaddii meherka
Sweden meher kama shaqeeyo.
Is-qabsiga la xiriira xeerka meherka Islaamka ayaan ahayn mid ka soconaya dalkan Sweden. Hase yeeshee dalka Sweden uu ka dhaqan geli doono xeerarka dalka u deg-san.
Qaxooti badan oo dhanka badda uga soo talaabaya Yurub
Tirada qaxootiga ah ee ka soo talaabeysa badda dhexe ”medelhavet” si ay qaxootinimo isaga dhiibaan qaaradda yurub ayaa aad kor ugu kacdey sanadkaan, wasiiradda arrimaha dibadda ururka midowga yurub ayaa maanta oo isniin ah waxay gorfeynayaan qaxootigaas ka soo qulqulaya dalka Libya.
Kor u kac ku yimid tirada ardeyda dhigata dugsiyada sare
Tirada ardeyda dugsiyada sare ee sannadka ayaa mar kale kor u kacday laga soo bilaabo sannadkii 2008. Sannadkan wax-barasho ayey dugsiyada sare ku jiraan ardey gaarsii-san 344 000 oo ardey. Waa tiro 6% ka badan sannadkii ina dhaafay, sida ay qortay hayadda maamulka iskuulladu - Skolverket
Qiimeeynta howshii cidamada Iswiidhishka ee Afqanistaan
Maanta ayey dawladdu shaacinaysa qiimeeynta howlihii ay ciidamada Iswiidhishka ahi ka geeysatay dalka Afqanistaan inta u dhaxeeysay 2002 ilaa 2014 halkey shan askari oo Iswiidhish ah ku dhinteen.
Shaqada qaranka oo dib loo soo celin doono Sweden
Dawladda dalka Sweden aya maanta go’aan ku gaari doonta in dib loo soo celiyo howlihii shaqada qaranka.